के हो उच्च रक्तचाप ? कसरी घटाउने ? यी हुन् ब्लड प्रेसरका लक्षण र उपचार - Kanchanjangha Online
कञ्चनजंघा अनलाईन १३ असार २०७७, शनिबार १०:०२ मा प्रकाशित ( १ साल अघि) ८९२ पाठक संख्या
पोखरा । टुबाट रक्तसञ्चार हुने बेलामा रक्तनली ९आर्टरी० को भित्तामा पर्ने दबाबलाई रक्तचाप भनिन्छ । रक्तचापलाई ‘मिलिमिटर अफ मर्करी’मा नापिन्छ । माथिको रक्तचापलाई ‘सिस्टोलिक’ र तलको रक्तचापलाई ‘डायस्टोलिक’ भनिन्छ ।
‘सिस्टोलिक’ र ‘डायस्टोलिक’ दुबै रक्तचाप शरीरको लागि उत्तिकै महत्वपूर्ण मानिन्छन् । सामान्य रक्तचाप १३० र ८५ भन्दा कम हुनपर्छ । उच्च रक्तचाप भन्नाले माथिको १४० वा सो भन्दा बढी र तलको ९० वा सो भन्दा बढी भएको अवस्थालाई भनिन्छ ।